Ingcali ye-Semalt Kwi-Website Data Scraping - Iimpawu ezilungileyo kunye ezimbi
I-Web scraping iye yajikeleza ixesha elide kwaye ithathwa njengeluncedo I-webmasters, intatheli, abaxhasi, abaprogram, abangabinkqubo, abaphandi bokuthengisa, abaphengululi kunye neengcali zeendaba zoluntu. Kukho iintlobo ezimbini zebhodi: i-bots efanelekileyo kunye neendawo ezimbi. I-bots ezilungileyo zenza iinjongo zokukhangela zibonise umxholo wewebhu kwaye zinikezelwa kakhulu ngabachwephesha beemarike kunye nabathengisi be-digital. Ingozi embi, ngakolunye uhlangothi, ayinalutho kwaye ijonge ukulimaza isayithi yokukhangela injini. Ukusemthethweni kokukrazula kwewebhu kuxhomekeke kukuphi uhlobo lwebhodi oyisebenzisileyo.
Ngokomzekelo, ukuba usebenzisa i-bots ezimbi ezithatha umxholo kumaphepha ewebhu ahlukeneyo ngenjongo yokuyisebenzisa ngokungekho mthethweni, i-web scraping ingaba yingozi. Kodwa ukuba usebenzisa i-Bot efanelekileyo kwaye ugweme imisebenzi echaphazelekayo kuquka ukukhanyela ukuhlaselwa kweenkonzo, ukukhwabanisa kwi-intanethi, izicwangciso ze-mining data, ukhuphiswano lwe-akhawunti, ukukhwabanisa i-akhawunti, ukukhwabanisa okungekho mthethweni, ukukhwabanisa kwe-digital, kunye nokweba kweefayili zengqondo, ngoko inkqubo ye-web scraping ilungile kwaye iluncedo ukukhula kwishishini lakho kwi-Intanethi.
Ngelishwa, uninzi lwabatshayeli kunye nokuqalisa ukuthanda iinto ezimbi kuba ziindlela ezincinci, ezinamandla kunye neendlela ezipheleleyo zokuqokelela idatha ngaphandle kwesidingo sobambiswano. Iikhampani ezinkulu, nangona kunjalo, zisebenzisa i-web scrapers ukuze zizuze kwaye azifuni ukutshabalalisa idumela labo kwi-intanethi nge-web scrapers engekho mthethweni. Iimbono eziqhelekileyo malunga nokusemthethweni kwe-web scraping kubonakala kungabalulekanga kuba ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kuye kwacaca ukuba iinkqubo zenkundla zombuso ziyaqhekeka amanqanaba angaphezulu okungekho mthethweni.
I-Web scraping yaqala njengenkqubo engekho mthethweni ngo-2000, xa ukusebenzisa i-bots kunye nezigubungela ukuba zenze i-intanethi zibukeke zingenangqondo..Izenzo ezininzi azizange zilungiswe ukuyeka le nqubo ukusasazeka kwi-intanethi kuze kube ngo-2010. I-eBay yokuqala yafaka izigwebo zangaphambili kwi-Bidder's Edge, ithatha ukuba ukusetyenziswa kwebhodi kwiwebhsayithi kwaphule umthetho we-Trespass kwi-Chattels. Ngokukhawuleza inkundla yanikezela izigwebo kuba abasebenzisi bafanele bavumelane nemimiselo kunye neemeko zesayithi kunye nenani elikhulu lebhobho liye lacinywa njengoko liyakubhubhisa i-computer ye-eBay. Umgwebo wuleza wakha wabuya enkundleni, kwaye eBay wayeka wonke umntu ukuba asebenzise i-bots ngokukrazula kwewebhu kungakhathaliseki ukuba zilungile okanye zimbi.
Ngowe-2001, i-arhente yokuhamba ibetyala abakhuphisanayo abaye baqhawula umxholo wayo kwiwebhsayithi ngoncedo lwezigulane ezinobungozi kunye neengcambu ezimbi. Abagwebi baphinde bathatha amanyathelo okulwa nolwaphulo-mthetho kwaye bawaxhasa amaxhoba, besithi ukubhula kwewebhu kunye nokusetyenziswa kwebhodi kunokulimaza amashishini athile e-intanethi.
Namhla, ngenxa yolwazi oluzimeleyo, oluzimeleyo kunye nolwazi, abantu abaninzi bathembela kwiinkqubo zokurhweba kwewebhu, kwaye ezininzi zokusetyenziswa kwewebhu ziye zaphuhliswa kule nkalo. Ngoku amagosa athi akuzona zonke ezo zixhobo ezinokwethenjelwa, kodwa ezo zihlawulelwe okanye iinguqulelo ze-premium zibhetele kunezo ze-web scrapers zamahhala.
Ngo-2016, iCongress yayidlulisele umthetho wokuqala ukujolisa iibhokhwe ezimbi kwaye iyakuthanda i-bots efanelekileyo. Umthetho we-Better Online Ticket Sales (BOTS) wawunqatshelwe ukusetyenziswa kwesofthiwe engekho mthethweni ejolise kwiiwebhsayithi, eyonakalise iinjongo zeejini kunye nokutshabalalisa amashishini abo. Kukho imiba yobulungisa. Ngokomzekelo, i-LinkedIn iye yachitha imali eninzi kwizixhobo ezithintelayo okanye zokuphelisa ii-bots ezimbi kwaye zikhuthaze i-bots ezilungileyo. Njengoko iinkundla zizama ukugqiba isigunyaziso sokubhula kwewebhu, iinkampani zithatha idatha yazo.